Ranona persily sy citron : Analana mony sy kentrona
Vita amin’ny akora natoraly tanteraka ity fangaro iray ity kanefa tena manadio tarehy tokoa. Manala ny mony sy ny tasy izy ity. Ankoatra izay anefa dia misoroka ny kentrona ihany koa.
Persily 2 sf
Ranom-boasarimakirana 1 sk
Ø Miaraka ampangotrahina ny rano sy ny persily ka rehefa mangotraka dia esorina ambony afo ary ampangatsiahana.
Ø Rehefa mangatsiaka dia afaka alefa ihany koa ny ranom-boasarimakirana. Aroina tsara, araraka anaty tavoahangy vera ary apetraka anaty vata fampangatsiahana.
Ø Hanadiovana ny tarehy amin’ny maraina sy amin’ny hariva ity fangaro ity mba hanidy ny mason-koditra sy hiadiana ny fahanteran’ny hoditra.